Kukwezva kutsva kuFrankfurt Airport: Fraport Visitor Center Inovhura Nyamavhuvhu 2
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Kukwezva kutsva kuFrankfurt Airport: Fraport Visitor Center Inovhura Nyamavhuvhu 2
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Germany Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
"Iyo Globe" ndiyo inonyanya kuratidza tekinoroji muVisitor Center. Iyi yekudyidzana LCD madziro inofungidzira ese ari kushanya nendege kutenderera pasirese munguva chaiyo.
Kukwezva kutsva kuri kuvhurwa Nyamavhuvhu 2 paFrankfurt Airport: iyo multimedia Fraport Visitor Center muTerminal 1, Hall C, ichagamuchira vashanyi vayo vekutanga panguva chaiyo yezhizha yekufamba mwaka.
Hupamhi hwayo hwakawanda hwekuratidzira kuratidzira inobvumidza vashanyi veese mazera kuti vaone iyo inonakidza nyika yeaviation kumusoro-padhuze.
Dzakakomberedza makumi matatu ematanho ekuratidzira uye ekudyidzana anopa mukana wekuona huru yekuvhiya nendege yeGerman munzira nyowani.
Pane 1,200 mativi emamita epasi nzvimbo, iwo maonesheni anopa ratidziro inonakidza kuseri kwezviitiko kuFrankfurt Airport uye neyeaviation mune zvese.
Vashanyi havangodzidza nezve zviitiko zveairport zvezuva nezuva; ivo zvakare vane mukana wekutarisa nhoroondo yaro, kutsvaga matekinoroji emagetsi, uye kufunga nezveramangwana rekubhururuka.
Zviratidziro zvinokoka vashanyi kuti vapindirane nekunyudza. Mune mumwe mutambo, vashanyi vanoisa hunyanzvi hwavo hwekuyedza nekuyedza iyo Airbus A320neo kunzvimbo yayo yekupaka. Chimwezve chiratidzo ndechechokwadi -ichoicho kutasva kuburikidza nendege yendege yekugadzirisa system. CEO weFraport Dr. Stefan Schulte akati: "Nzvimbo yedu yeVultimedia Visitor Center inobvumidza vanhu kuti vanzwisise zvirinani uye nekuzvionera pachavo nhandare yendege yakasiyana-siyana uye yakaoma kunzwisisa. Kukwezva kutsva kuchave kiyi yekusimbisa kutaurirana kwenguva refu nenharaunda yedu nevaenzi vanobva kune dzimwe nzvimbo dzeGerman nepasirese. ”
"Iyo Globe" ndiyo inonyanya kuratidza tekinoroji muVisitor Center. Iyi yekudyidzana LCD madziro inofungidzira ese ari kushanya nendege kutenderera pasirese munguva chaiyo. Iyo inoumbwa nemakumi masere nemasere ekuratidzira, akasanganiswa kugadzira imwechete skrini inotenderera mamwe makumi maviri nemashanu metres. Iyo sisitimu yakasarudzika zvechokwadi: hapana kumwe kunokwanisa kuratidzira zviuru zvekufamba kwendege mune zvakadzama zvakadaro. Flight data yeiyo Globe inopihwa neFlightAware, yekuUS ndege yekutevera chikuva. Fraport vanobatana neFlightAware kugadzirisa data rinodikanwa kuti riitwe paFrankfurt Airport. Kunyanya, iyo data yakapihwa neFlightAware inobvumira kuronga kuri nani kwemaitiro enhandare.
Iyo 55-mita-mita mita yeAirport City (pachiyero che1: 750) inokoka vashanyi kuti vatange rwendo rwechokwadi rwekutsvaga.
Iyo Fraport Yevashanyi Center yakapera mukudonha 2020, zvichitevera makore maviri ekuvaka, pamutengo weinenge 5.7 mamirioni euros. “Taifanirwa kumbomisa kuvhura kwaro kakawanda nekuda kwedenda iri. Saka ini ndiri kunyanya kufara kuti ikozvino ndizarure kukoka kwedu kutsva kwevashanyi kuFrankfurt Airport. Muzinda unoshandura mwenje wepanyika inonakidza yehupenyu hweairport, "akatsanangura Anke Giesen, nhengo yedare repamusoro reFraport uye Executive Director veRetail neReal Estate.
Mitikiti kuenda pakati inofanirwa kutengwa online pamberi pamberi pa www.fra-tourpackages.com/en . Kubvumikisa kusimbisa kunodiwa kuti ugamuchire. Parizvino, matikiti haasi kuwanikwa kuairport pachayo.
Iyo Fraport Visitor Center ichave yakavhurwa zuva nezuva kubva 11am kusvika 7 pm. Mutengo wekupinda wakatarwa wevakuru ndeye gumi nemaviri euros. Mutengo wakaderedzwa we12 euros unowanikwa kune vanokodzera vashanyi vane inoenderana ID. Vana vari pasi pemana vanopinda mahara. Munguva yezororo razvino redunhu rechikoro, richipera Nyamavhuvhu 10, vashanyi vachakwanisa kupaka kweawa rimwe mahara murunyararo rwevanhu; slip yekupaka inofanirwa kuunzwa kune Yekushanyira Center yekugamuchira tafura kuti isimbiswe.
Iyo Fraport Visitor Center inogona zvakare kuverengerwa senzvimbo yakasarudzika yezviitiko. Yakagadzirirwa neazvino tekinoroji yekuratidzira, uye imwe-ye-ye-mhando panorama panorama inoita kuti ive yakanaka kumashure kweyakagadzirwa zvigadzirwa, yekudhinda misangano uye mapato ezuva.